बागलुङ घर बताउने एक युवतीको मनै भक्कानिने हृदयस्पर्षी कथा ! - Enepalese.com
बागलुङ घर बताउने एक युवतीको मनै भक्कानिने हृदयस्पर्षी कथा !
इनेप्लिज २०७४ फागुन १४ गते ११:५३ मा प्रकाशित
रितु आफ्नो घर बाल्गुङको कुनै एउटा ठाउँ बताउछिन, जहा उनको परिवारमा आमा, दाई र उनि मात्र थिईन् । उमेर बढे सगै उनका दाई लागुऔषधको दलदलमा फसे र परिणामस्वरुप त्यही लागुऔषध नै मृत्युको कारण बन्यो । दाईको मृत्यु पछि टुहुरो भएको रितुको परिवार अनेक समस्यामा पर्न थाल्यो । जसका कारण रितुकी आमा एक मुठी माम र थोरै दामका लागी मेलापात धाउन थालिन र त्यतिकैमा एकदिन लागुऔषधको नशामा रंगिएका पिपाशुहरुको उनि शिकार बनिन् ।
लागुऔषधका कारण आमा र दाई गुमाएकी रितु अनेक सपनहरु बुन्दै सडक पेटिमा जिवन विताईरहेकी छिन । र अन्तयमा यस्तो कुलतमा नफस्न समेत आग्रह गरेकी छिन् । यो एक काल्पनिक कथा हो जुन पोखराको एक विद्यालयमा कक्षा १० मा अध्ययनरत एक युवतिले लागुऔषध दुर्व्यसनि विरुद्धको महाअभियनामा आयोजित एक कार्यक्रममा अभिनय सहित प्रस्तुत गरेकी थिईन । ( हेर्नुहोस् पुरा भिडियो सेयर गर्न नभुल्नुहोला )